အထီးကြွက်များတွင်လိင်ဆိုင်ရာဆုလာဘ် - သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြေအနေကို ဦး စားပေးမှုများအပေါ်လိင်အတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၂၀၀၉) - Your Brain On Porn
အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်: သုတ်ရည်လွှတ်နဲ့ဆက်စပ် conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် intromissions (2009)
Horm ပြုမူနေ။ 2009 ဇန်နဝါရီ; 55 (1): 93-7 ။ EPub 2008 စက်တင်ဘာ 12 ။
ခရစ္စအမ် Tenk, 1, * ဟေလာရီ Wilson က, 3, * Qi Zhang က, 1 Kyle K. အိုး, 1,2 နှင့် Lique အမ် Coolen1,2
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးကို Horm Behav တွင်ရရှိနိုင်သည်
အမျိုးမျိုးသောအပြုအမူမော်ဒယ်များနှင့်လေ့လာမှုများအထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြိုးများနှင့်အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများရှိကြောင်းအကြံပြုသက်သေအထောက်အထားပေးပါပြီ။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကို၏အကြိုးတန်ဖိုးများနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်သာသတင်းအချက်အလက်များလည်းမရှိ။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုတစ်ခုအခွအေနေအရပျကိုဦးစားပေး (CPP က) သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် intromissions သူတို့ရဲ့အကြိုးမက်လုံးပေးတန်ဖိုးများအတွက်ကွာခြားခြင်းရှိမရှိဖြေရှင်းရန်ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်း differential ကိုကြိုးတန်ဖိုးများကိုကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအပေါ်မှီခိုခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိအမှာစကားပြောကြားသည်။ လိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအထီး CPP က box ထဲမှာအခန်းတဦးနှင့်အတူ intromissions သို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်ဖြစ်စေ၏တဦးတည်းတွဲဖက်မှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အေးစက်ပြီးနောက် CPP ကယန္တရား၏အသီးအသီးအခန်းသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုပြီးတော့တိုင်းတာခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်လိင်ကြုံတွေ့အထီးအနေဖြင့်သာလိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်လိင်ကြုံတွေ့မဟုတ်, သုတ်ရည်လွှတ်များအတွက် CPP ကဖွဲ့စည်းခဲ့, အထီး intromissions များအတွက် CPP ကဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက်, သတ်မှတ်ထားသောအခန်းထဲကအတူသုတ်ရည်လွှတ်၏မျိုးစုံဒဿနိကဗေဒ intromissions ၏ display ကိုအတူတွဲထိန်းချုပ်မှုအခန်းထဲကတစ် CPP ကဆွေမျိုးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာအဲဒီမှာကြိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုအဆင့်ဆင့်သုတ်ရည်လွှတ်အကျိုးအရှိဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ပြီး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို၏အကြိုးမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအပျေါမှီခိုကြောင်းကိုအဆိုပါယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။
keywords: ဆုလာဘ်, အခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး, သုတ်ရည်ထိ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အသင်းအဖွဲ့များသင်ယူမှု
အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ anogenital စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု, တောင်ပေါ်, intromissions နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဒြပ်စင်၏ရေးစပ်တဲ့ကြိုးများနှင့်အားဖြည့်အပြုအမူဖြစ်ပါသည်။ သုတ်ရည်လွှတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအများဆုံးအားဖြည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသော (Coolen et al, 2004; ။ ပြန်လည်သုံးသပ် Pfaus နှင့် Phillips က, 1991 ကြည့်ပါ) ။ ဥပမာအားဖြင့်, သာ intromit ခွင့်ပြုခဲ့သို့မဟုတ် mount, ဒါပေမယ့် ejaculate မဟုတ်ယောက်ျားမှမတူဘဲ, သုတ်ရည်လွှတ်မှ copulate ခွင့်ပြုခဲ့အထီးကို T-ဝင်္ (Kagan ကပြောပါတယ်, 1955) တွင်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြေးအမြန်နှုန်း, ဖြောင့်-လက်မောင်းလေယာဉ်ပြေးလမ်းဖွံ့ဖြိုးပြီး (လိုပက်ဇ် et al ။ , 1955) , ဒါမှမဟုတ်အတားအဆီးတောင်တက် (ရှက်ဖီး et al ။ , 1951) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သုတ်ရည်လွှတ် conditional copulatory ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဒါကလက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူတစ်ဝတ္ထုအနံ့၏အသင်းအဖွဲ့ (များအတွက် preference ကိုမှဦးဆောင်အဖြစ်သုတ်ရည်လွှတ်မှ copulate ခွင့်ပြုခဲ့ယောက်ျားတစ်အလားတူရနံ့အမျိုးသမီး, ဆီသို့ facilitated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားအတွက်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ intromissions ဖော်ပြရန်ခွင့်မပြုဖြစ်ပါသည် Kippin နှင့် Pfaus, 2001) ။
သုတ်ရည်ထိအဆိုပါကြိုးရှုထောင့်တစ်ဦး conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ပါရာဒိုင်း (Pfaus နှင့် Phillips က, 1991) ကိုသုံးပြီးသရုပ်ပြပါပြီ။ အဆိုပါ CPP ကပါရာဒိုင်းအစီအမံယခင်ကအားဖြည့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူတွဲခဲ့ကြနှင့်ဤကြိုးဖြစ်ရပ်များနှင့်အကျိုးကို-related လှုံ့ဆော်မှုများမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုနိုင် (Carr က et al ။ , 1989) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုချဉ်းကပ်။ ပုံမှန်အား CPP ကသရုပ်ပြအသုံးပြုတဲ့ယန္တရားခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ differential တွဲဖြစ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့အခန်းပါဝင်ပါသည်: တဘက်ဘာမျှတစ်ခုသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုခြယ်လှယ်နှင့်အတူတွဲနေစဉ်တစ်ဖက်, သုတ်ရည်လွှတ်မှသုတ်ရည်ထိအတူတွဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်သုတ်ရည်လွှတ်မှ copulate ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်အထီးကြွက်ကဒီအပြုအမူ (; Martinez နှင့်သိပ်မရှိပါဘူး, 1990 Agmo နှင့် Berenfeld, 2001) နဲ့တွဲအဆိုပါအခန်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရန်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသုတ်ရည်လွှတ်၏ display ကိုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ် intromissions ၏ display ကိုလုံလောက်သောလျှင်ရှိမရှိမသိရသည်။ ကျနော်တို့သုတ်ရည်လွှတ်ယင်း၏ သာ. ကြီးမြတ်မက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှုများပေးထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အခြားဒြပ်စင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းကြောင်း hypothesize ။
ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်ချက်၏လက်ရှိအစုံသုတ်ရည်လွှတ်သည့်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးမျိုးစုံ intromissions ၏ display ကိုထက်ပိုပြီးကြိုးရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, intromissions သို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Sprague Dawley ကြွက် (250-350g) Harlan ဓါတ်ခွဲခန်း (Indianapolis, IN, အမေရိကန်နိုင်ငံ) သို့မဟုတ်ချားလ်စ်မြစ် (Senneville, QC, ကနေဒါ) မှရရှိသောနှင့် singly တစ် 12 နာရီပေါ်သျောခဲ့ကြသည်အလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာပြောင်းပြန် (10 နံနက်ပယ်ထွန်း ) ။ အစားအစာနှင့်ရေအမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း မှလွဲ. အားလုံးအချိန်များတွင်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ stimulus အမျိုးသမီး ovariectomized နှင့်အရေပြားအောက်ဆုံး 5% 17-β-estradiol benzoate Silastic တောင့ (1.98 မီလီမီတာအတွင်းအချင်း, 0.5 စင်တီမီတာအရှည်, Dow Corning ကော်ပိုရေးရှင်း, MI, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နဲ့ကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception ကြိုတင်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများမှအဓိကချို့ယွင်း (နှမ်းဆီ 500 ml အတွက် 0.1 μg) ၏အရေပြားအောက်ဆုံးထိုးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လေးနာရီအားဖြင့်သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးစင်စင်နာတီတက္ကသိုလ်၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီ, အနောကျပိုငျးအွန်တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ၏တက္ကသိုလ်ကအတည်ပြု, နှင့်သုတေသနအတွက်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါတိရိစ္ဆာန်များပါဝင်သော NIH နှင့် CCAC လမ်းညွှန်ချက်တညီတည်းခဲ့ကြသည်။
conditional ရာအရပျ preference ကိုယန္တရား
အခွအေနေအရပျကိုဦးစားပေး (CPP က) ယန္တရား (Med Associates မှ, ဗားမောင့်, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နှစ်ခုစမ်းသပ်အခန်းများ (28 × 22 × 21 စင်တီမီတာ) ဗဟိုအခန်းအားဖြင့်ကွဲကွာပါဝင်သည် (13 × 22 × 21 စင်တီမီတာ) ။ ကုန်သည်များနှစ်ဦးစလုံးအမြင်အာရုံနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောတွေကိုအားဖြင့်မတူညီခဲ့သညျ။ အခြားအနက်ရောင်နံရံများနှင့်အပြိုင် bar ကိုအခင်းခဲ့စဉ်တစ်ခုမှာစမ်းသပ်ခန်းအဖြူနံရံများနှင့်သတ္တုဇယားကွက်အခင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗဟိုအခန်းမီးခိုးရောင်နံရံများနှင့်ချောမွေ့မီးခိုးရောင်ကြမ်းပြင်ပါဝင်သည်။ ဗဟိုအခန်း၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တံခါးပေါက်အခန်းကွဲကွာ, နှင့်ယန္တရားလျှောက်လုံးတိရစ္ဆာန်အခမဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်ပြုပါရန်ကြီးပြင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဧရိယာမှသူတို့ကိုအကျဉ်းချထားရန်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးစမ်းသပ်ခြင်း (သုံးခြောက်လမှနာရီအကြာတွင်ပယ်ထွန်း) အမှောင်ထဲမှာအဆင့်နေရာယူခဲ့ပါတယ်။ ကနဦးအခြေခံဦးစားပေးတစ်ဦးချင်းစီတိရိစ္ဆာန် 15 မိနစ် CPP ကယန္တရားအပေါငျးတို့သအခန်းများအခမဲ့ access ကိုပေးသည်ခဲ့သောအတွက် pretest အားဖြင့်စမ်းသပ်မှု၏နေ့တဦးတည်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြသည်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအခန်းသုံးစွဲအချိန် Microscoft Excel ကိုစိတ်တိုင်းကျ Macro အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ တင်ပါးအပါအဝင်တိရစ္ဆာန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုစည်, ကြောင်းအခန်းထဲကတည်ရှိသောခဲ့သည်ဆိုပါကတိရစ္ဆာန်တစ်ဦးခန်း၌ပစ္စုပ္ပန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်လျော့နည်းအချိန်ကို (အစပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောအခြမ်း) သုံးစွဲရသောအခနျးလိင်-တွဲဘက် designated ခဲ့ပါတယ်, နှင့်အခြားသောဘေးထွက် (အစပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်ခြမ်း) ကိုထိန်းချုပ်ခြမ်းသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ အေးစက်ရက်ပေါင်းနှစ်ခုနှင့်သုံးရက်နေ့ရာအရပျကိုယူ။ လိင်အေးစက်တစ်နေ့တာအတွင်း, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချက်ချင်း 30 မိနစ် CPP ကယန္တရားအတွင်းလိင်-တွဲအခန်းထဲသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်, ထို့နောက်မိမိတို့၏နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာလက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူ mated ။ ထိန်းချုပ်မှုအေးစက်တစ်ရက်စဉ်အတွင်းတိရိစ္ဆာန်များဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်ကနေတိုက်ရိုက်ယူခဲ့ကြသည်နှင့်အ 30 မိနစ် CPP ကယန္တရား၏ထိန်းချုပ်မှုအခန်းတင်လိုက်တယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုအတွက်ဝက်တိရစ္ဆာန်နေ့ကနှစ်ခုပေါ်တွင်လိင်တွဲဖက်မှုပေးသောနေ့သုံးရက်တွင်ထိန်းချုပ်မှုအခန်းနေရာချပေးခဲ့သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောတိရိစ္ဆာန်များနေ့ကနှစ်ခုနှင့်နေ့ရက်ကိုသုံးပေါ်တွင်လိင်တွဲဖက်မှုအပေါ်ချိတ်တွဲထိန်းချုပ်မှုပေးထားခဲ့ကြသည်။ (ထိုနှစ်ခုအေးစက်ရက်ပေါင်းပါဝင်သည်ဟု) ဒီတစ်ခုတည်းအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်အခန်းများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များ '' preference ကိုပု pretest ဖို့လုပျထုံးလုပျနညျးတူညီခဲ့ကြောင်း, အ, နောက်ဆုံးစတုတ္ထနေ့၌ posttest သုံးပြီးပြန်လည်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
လေးစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုများအတွက်အေးစက်ဒီဇိုင်းနှင့်အုပ်စုတစ်စုနံပါတ်များဇယား 1 တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်။ (သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲခြောက်ရှစ် intromissions; ဎ = 10) ပထမစမ်းသပ်မှုများတွင်လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားသုတ်ရည်လွှတ် (ဎ = 11) သို့မဟုတ် intromissions ဖြစ်စေလက်ခံရရှိမျှလိင်အပြုအမူဟာအစပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်အခန်းထဲကအတူတွဲခဲ့သည်နေစဉ်ပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောအခန်းထဲကအတူတွဲ။ သုတ်ရည်လွှတ်၏ display သုတ်ရည်လွှတ်ပေါ်မှာတိရစ္ဆာန်အပြသမှုအဖြစ်အမျိုးသမီးအဖော်အတွက်အင်္ဂါဇာတ် plug ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်ယင်းဝိသေသမော်တာအပြုအမူအပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုယောက်ျား၏ပါဝင်သည်ဟု, ထည့်သွင်းခဲ့သည် (ဎ = 10) ကိုင်တွယ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုထိန်းသိမ်းရေးအောက်ပါ CPP ကယန္တရား၏အခန်းထိတွေ့ပေမယ့်မိတ်လိုက်စရာမလိုဘဲခဲ့ကြသည်ကြောင်းကို၎င်း, အရှင်ကို un-နှိုးဆွထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုများတွင်လိင်ကြုံတွေ့အထီးအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားကြိုတင် CPP ကအေးစက်ငါးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများအတွက်တဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်မှ mated ခဲ့ကြသည်။ ငါးပါးအစည်းအဝေးများသုံးခုအတွက်သုတ်ရည်လွှတ်ပြသသာယောက်ျားသည်ဤစမ်းသပ်မှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှု 1 ၌ရှိသကဲ့သို့, ဤလိင်ကကြုံတွေ့ယောက်ျားသုတ်ရည်လွှတ် (ဎ = 10) သို့မဟုတ် intromissions ဖြစ်စေနှင့်အတူအေးစက်လက်ခံရရှိ (သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲခြောက်ရှစ် intromissions; ဎ = 10) မျှလိင်အပြုအမူကိုအခြားအတူတွဲခဲ့သည်နေစဉ်ပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောအခန်းထဲကအတူတွဲ အခန်းထဲက။ တတိယစမ်းသပ်မှုများတွင်လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီး (ဎ = 8) ကကနဦး Non-နှစ်သက်သောအခန်းထဲကနှင့် intromissions (သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲခြောက်ရှစ် intromissions) နဲ့တွဲသုတ်ရည်လွှတ်ပြသအခြား (ထိန်းချုပ်မှု) အခန်းထဲကအတူတွဲ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, စတုတ္ထစမ်းသပ်မှု, ကြိုတင်ဒီစမ်းသပ်မှုမှလိင်ရင်တော့မှားမယ်ခဲ့အထီး (ဎ = 10) တွင်သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် intromissions (ခြောက်ရှစ် intromissions) ပြသယခင်စမ်းသပ်မှု၌ရှိသကဲ့သို့, အသီးသီးတို့သည်ပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအခန်းများနှင့်အတူတွဲ။ သို့သော်ဒီနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုထဲမှာ, အေးစက်အဆင့်သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် intromissions (တစ်ဦးချင်းစီတွဲဖက်မှု၏ 3) ၏အခြားကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုလက်ခံရရှိကူထီးထားတဲ့ကာလအတွင်းခြောက်လအေးစက်ရက်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ယောက်ျား၏ထက်ဝက်ကိုပထမဦးဆုံးအေးစက်နေ့၌ချိတ်တွဲထားတဲ့သုတ်ရည်လွှတ်လက်ခံရရှိနှင့်တစ်ဝက်တစ် intromissions တွဲဖက်မှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လေးပါးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစမ်းသပ်ချက်အသီးအသီးအဘို့အ conditioning ဒီဇိုင်းနှင့်အုပ်စုတစ်စုနံပါတ်များ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ CPP ကစမ်းသပ်ချက်ထံမှကောက်ခံ pretest နှင့် posttest အချက်အလက်များကို preference ကိုရမှတ် (လိင်-တွဲအခန်းသုံးစွဲအချိန်ရာခိုင်နှုန်း) နှင့်မဟုတ်တဲ့အတွက်သုံးစွဲလိင်-တွဲအခန်းထဲကအနုတ်အချိန်အတွက်သုံးစွဲခြားနားချက်ရမှတ် (အချိန်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည် လိင်-တွဲအခန်းထဲက) ။ တွဲ t-စမ်းသပ်မှုဟာ preference ကိုရမှတ်နှင့် pretest နှင့် posttest အကြားခြားနားချက်ရမှတ်၏အရေးပါမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦး Pearson ကုန်ပစ္စည်း Moment ညမညသဘောတရားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီကိုစမ်းသပ်မှုအတွင်း intromissions ၏နံပါတ်များနှင့် posttest preference ကိုရမှတ်များနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်အကြားတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အဓိပ်ပာယျအဘို့သတ်မှတ်ထား 0.05 မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုကနေရလဒ်များသည် pretest နှင့် posttest (ပုံ။ 1) အတွင်းအခန်းသုံးစွဲအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းလိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီး, အသုတ်ရည်လွှတ်-တွဲအခန်းထဲသို့သိသိသာသာ CPP ကဆည်းပူးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ preference ကိုရမှတ် (p = 0.023) နှင့်ကွာခြားချက်ရမှတ် (p = 0.012) နှစ်ဦးစလုံးဟာသုက်လွှတ်-တွဲအခန်းကုန်ကာလ၌သိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားကိုလည်း intromission-တွဲအခန်းထဲသို့သိသိသာသာ CPP ကရရှိခဲ့သည်။ အေးစက်ပြီးနောက်ရင်တော့မှားမယ်အထီးထိန်းချုပ်မှုအခန်းထဲက (; p = 0.006 ခြားနားချက်ရမှတ်; ။ သ 0.005 p = 1 preference ကိုရမှတ်) ထက် intromission-တွဲအခန်းသိသိသာသာပိုပြီးအချိန်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ 35.8, p = 2.9 ± 38.3% သာရှိပြီးပြည်ပမှ 2.7 ± 0.47%; Difference ရမှတ်: Posttest နှိုင်းယှဉ် Pretest: un-stimulation ထိန်းချုပ်မှုယောက်ျားမဆိုဦးစားပေး (ဦးစားပေးရမှတ်ဖွဲ့စည်းရန်မပြုခဲ့ Posttest နှိုင်းယှဉ် Pretest: 168.4 စက္က± 34.4, p နှိုင်းယှဉ် 152.4 စက္က± 33.3 = 0.71) ။
သန္ဓေသားလောင်း (A, B) သို့မဟုတ် intromissions (C, D) ပြသခြင်းနှင့်အတူတွဲဖက်ထားသောတစ်ခုမှာလိင်အရနုံအမျိုးသားများတွင် CPP ကိုသွေးဆောင်သည်။ (A, C) ဦး စားပေးရမှတ်၊ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း (A) သို့မဟုတ် intromissions- (C) တွဲသည့်အခန်းတွင်သုံးစွဲသောအချိန်ရာခိုင်နှုန်း။ (ခ၊ )) ခြားနားချက်ရမှတ်၊ အချိန် (နောက်ထပ်…)
ဒုတိယစမ်းသပ်မှုမှရလဒ်များအရ CPP စစ်ဆေးမှုမတိုင်မီလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံယူခဲ့သောအမျိုးသားများသည်ပိုမိုနှစ်သက်သောရမှတ် (p <0.001) နှင့်ခြားနားချက်ရမှတ် (p <0.001) တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်းသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းအခန်းအတွင်း၌ CPP တစ်ခုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 2) ။ သို့သော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနုံချာသောအမျိုးသားများရှိတွေ့ရှိချက်များနှင့်မတူဘဲလိင်အတွေ့အကြုံရှိသောယောက်ျားများသည် intromissions-တွဲထားသောအခန်းထဲတွင် CPP ကိုမဖွဲ့စည်းခဲ့ပါ။ အဆိုပါ preference ကိုရမှတ် (p = 0.183) နှင့်ခြားနားချက်ရမှတ် (p = 0.235) ကိုသိသိသာသာအေးစက်ပြီးနောက်ပြောင်းလဲသွားတယ် (ပုံ။ 2) ။
သန္ဓေသားလောင်း (A, C) ၏ပြသမှုနှင့်အတူတွဲဖက်ပေမယ့် intromissions (C, D) နှင့်မတွဲဖက်ပါကလိင်အတွေ့အကြုံရှိသောယောက်ျားများတွင် CPP ကိုသွေးဆောင်သည်။ (A, C) ဦး စားပေးရမှတ်၊ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း (A) သို့မဟုတ် intromissions- (C) တွဲသည့်အခန်းတွင်သုံးစွဲသောအချိန်ရာခိုင်နှုန်း။ (ခ၊ )) ခြားနားချက် (ပို၍ …)
တတိယနှင့်စတုတ္ထစမ်းသပ်မှုများတွင်သုတ်ရည်လွှတ်လွှတ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသုတ်ရည်လွှတ်မှုသည် ပို၍ ကျရောက်သည်ဟူသောယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုများမှရလဒ်များအရပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် CPP စစ်ဆေးမှုမတိုင်မှီလိင်အရနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအမျိုးသားများသည်သန္ဓေသား - တွဲထားသောအခန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် intromissions-paired chamber နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုနှင့်တွဲဖက်ပြီးနောက် CPP ကိုမဖွဲ့စည်းခဲ့ပါ။ ၃) ကျနော်တို့သန္ဓေသားနှင့် intromission တစ်ခုတည်းတွဲဖက်လိင်နုံသောတိရိစ္ဆာန်များအတွက် CPP ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ခြားနားချက်ကိုသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ကြောင်းတွေးဆ။ ထို့ကြောင့်, စတုတ္ထစမ်းသပ်မှုအေးစက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုအမျိုးအစားသုံးခုပါဝင်သည်ဟုတစ်ခုတိုးချဲ့အေးစက်ကာလနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ intromissions နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုသုံးခုတွဲပြီးနောက်အမျိုးသားများသည် preomission နှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်များသိသိသာသာတိုးလာခဲ့သည် (p <3 preference and ခြားနားရမှတ်များ၊ ပုံ ၃) ။ သုတ်ခြင်း - တွဲထားသောဆွေမျိုးများအတွက်။ ထို့ကြောင့်မျိုးစုံတွဲဖက်မှုနှင့်အတူ, သုတ်ရည်လွှတ်မှုမရှိဘဲ intromissions ၏ display ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသုတ်ရည်လွှတ်တဲ့ CPP ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းသွေးဆောင်။
သန္ဓေသားလောင်းခြင်းပြသမှုနှင့်တွဲဖက်မှုတစ်ခုသည်ထိန်းချုပ်မှုအခန်း (ခ) ၏ပြသမှုနှင့်တွဲဖက်သောအခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနုံချာသောအမျိုးသားများအတွက် CPP ကိုသွေးဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမစတင်မှီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနုံချိးသောအမျိုးသားများ (ထပ်မံ…)
။ Coolen et al, 6a; ။ ဒဿနိကဗေဒ intromissions ၏ display နဲ့အတူဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည့်အခါဤအအနီးကပ်ပုံမှန်အားသုတ်ရည်လွှတ် (Coolen et al ရှေ့ intromissions ၏နံပါတ်ကိုက်ညီမှုကတည်းက 8 အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်အသီးအသီးအတွက်, ယောက်ျား, 1996-2003 intromissions ဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည် ) ။ အမှန်မှာထိုသုတ်ရည်လွှတ်-တွဲအုပ်စုများအတွက်များစွာသောယောက်ျားကြိုတင်သုတ်ရည်လွှတ်မှ 8 သို့မဟုတ်နည်းပါးလာ intromissions ပြသ။ သို့သော်စမ်းသပ်ချက်အသီးအသီးရှိအခြို့အထီးကြိုတင်သုတ်ရည်လွှတ်မှ 8 intromissions ထက်ပိုမိုပြသ။ ထို့ကြောင့်, intromissions နှင့် CPP, ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်တဲ့ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖွဲ့စည်းခြင်း၏နံပါတ်များအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ intromissions နှင့် CPP ၏စကားရပ်၏နံပါတ်များအကြားစမ်းသပ်ချက်မဆိုမဆက်စပ်မှုရှိကြ၏ဖော်ပြခဲ့တယ်။
လက်ရှိလေ့လာမှု CPP ကပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးဆန်းစစ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ intromissions ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းတဲ့အခါမှာသုတ်ရည်လွှတ် intromissions ၏ display ကိုနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအကြိုးတန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်သောယူဆချက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အမှန်မှာကသုတ်ရည်လွှတ်ပေမယ့်မပေး intromissions လိင်အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဝယ်ယူမှုကြောင့်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားတစ်ဦး intromission-တွဲပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထားတဲ့သုတ်ရည်လွှတ်-တွဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု CPP ကရရှိခဲ့သည်။ လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီး CPP ကအောက်ပါ intromissions ဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်သုတ်ရည်လွှတ်အဖြစ်သုတ်ရည်လွှတ်၏ display ကိုသာ, လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီများအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်ကတည်းကလိင်အတွေ့အကြုံကို, (သုတ်ရည်လွှတ်မပါဘဲ) intromissions ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။
CPP က (Miller နဲ့ Baum, 1990 ။ , Hughes et al 1990;; Mehrara နှင့် Baum, 1987) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများကိုလေ့လာဖို့အသုံးပြုတဲ့ရေတွင်း-ထူထောင်ပါရာဒိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ CPP ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှစ်ခုမူကွဲ, postcopulatory ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့် copulatory CPP က, အမိတ်လိုက်သည့် CPP ကအခန်းထဲကသို့မဟုတ်မအတွက်ရာအရပ်ကိုကြာရှိမရှိအတွက်ကွာခြား (Pfaus et al ။ , 2001) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၌အထီးကြွက်သီးခြားနယ်ပယ်ထဲမှာ copulate ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ထို့နောက် CPP ကယန္တရားထဲကတစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအခန်းမှချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဒုတိယလုပ်ထုံးလုပ်နည်းခုနှစ်, သုတ်ရည်လွှတ်မှသုတ်ရည်ထိပု CPP ကအခန်းထဲကသူ့ဟာသူအတွင်းပေါ်ပေါက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောချင်းတိုးတက်ရေးပါတီမှု။ သို့သော် postcopulatory ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ CPP က၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပပျောက်ဖို့ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အထီးကြွက်ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိတွေ့နေကြသောအခါ, mesolimbic စနစ် (Balfour et al ။ , 2004) activated ဖြစ်ယူဆရသည့်အေးစက်တွေကိုတုန့်ပြန်မျှော်လင့်ထင်ဟပ်။ တစ်ဦး copulatory CPP ကပါရာဒိုင်းများအသုံးပြုမှုထို့ကြောင့် CPP ကအခန်းကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်စပ် Conditions တွေကိုထိတွေ့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကွောငျ့, ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်လိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက် intromissions နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုခွဲထုတ်နိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါ postcopulatory လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
CPP ကစမ်းသပ်ချက်အတွက်နောက်ထပ် variable ကိုအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သည်: (။ Garcia က Horsman နှင့်သိပ်မရှိပါဘူး, 2007; Hughes et al, 2004; Miller နဲ့ Baum, 1990) တစ်ခုတည်း (။ Straiko et al, 1987) သို့မဟုတ်မျိုးစုံဒဿနိကဗေဒဖြစ်စေ mating- မှု သွေးဆောင် CPP က။ လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ဦးရည်မှန်းချက်လိင်-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ခဲ့ကတည်းကတစ်ခုတည်းသောဒဿနိကဗေဒမိတ်လိုက်-သွေးဆောင် CPP ကတစ်ဦးမျက်နှာကြက်ရောက်ရှိတားဆီးနိုင်ရန်အတွက်စမ်းသပ်ချက်များအများစုတို့အတွက်အသုံးချခဲ့ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုတစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသုတ်ရည်လွှတ်၏တစ်ခုတည်း paring, ယောက်ျားအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဝယ်ယူဘို့လုံလောက်ကြောင်းယခင်လေ့လာမှုများ (Agmo နှင့် Berenfeld, 1990) အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်ချက်များတွင်လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားသုတ်ရည်လွှတ် intromissions ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုရှိကြောင်းကိုညွှန်းတဲ့ intromission-တွဲပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထားတဲ့သုတ်ရည်လွှတ်-တွဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု CPP ကရရှိခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သုတ်ရည်လွှတ်ကြောင်းပြသရာယခင်ကို T-ဝင်္ (Kagan ကပြောပါတယ်, 1955) တွင်သင်ယူမှု / အားဖြည့်လေ့လာမှုများ, ဖြောင့်-လက်မောင်းလေယာဉ်ပြေးလမ်း (လိုပက်ဇ် et al ။ , 1955), သို့မဟုတ်အတားအဆီးတောင်တက် (ရှက်ဖီး et al ။ , 1951), နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် ပိုပြီးတစ်ဦးတည်းတောင်ပေါ်သို့မဟုတ် intromissions ထက်အားဖြည့်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သုတ်ရည်လွှတ် conditional copulatory ဦးစားပေး (Kippin နှင့် Pfaus, 2001) ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်ခရော et ခြင်းဖြင့်ရှေ့ဆက်ထားယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။ အယ်လ်။ (1993) "တစ်ဦးစစ်ကူအဖြစ်လိင်၏အစွမ်းသတ္တိကိုတိုက်ရိုက် copulatory အပြုအမူ sequence ကိုဖြည့်စွက် subjects မှရသောအတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်" အဲဒီ။
ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်မှုများတွင် intromission-တွဲအခန်းထဲကကျော်သုတ်ရည်လွှတ်-ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် preference ကိုမျိုးစုံအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေလိုအပ်သောနှင့်တစ်ခုတည်းတွဲဖက်မှု CPP ကသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့ပေ။ တဦးတည်းရှင်းပြချက်လိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ၏တဦးတည်းတွဲဖက်မှုသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် intromissions ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုခွဲခြားဖို့မလုံလောကျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နောက်ထပ်ရှင်းပြချက် intromissions ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ intromissions လိင်နုံတိရိစ္ဆာန်များအတွက် CPP ကသွေးဆောင်နေချိန်တွင်သုက်လွှတ်လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီများအတွက်မရှိမဖြစ်သောတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, အတူလျော့ချကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သုတ်ရည်လွှတ် intromissions ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်ဂုဏ်သတ္တိများရှိကြောင်းအဆိုပါတွေ့ရှိချက်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း ejaculation- ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့သို့မဟုတ် intromission-related အချက်ပြမှုများများအတွက်တည်ရှိခွဲခြားသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ ဒီအယူအဆ၏ထောက်ခံမှုခုနှစ်, အာရုံကြော activation များအတွက်အမှတ်အသားအဖြစ် Fos သုံးပြီးကြွက်, ကြွက်နှင့်တက်လာတယ်, အတွက်အများအပြားလေ့လာမှုများ, ပု medial amygdala ၏သေးငယ်တဲ့ငျဒသေရှိ၏အိပ်ရာနျူကလိယအထူးသသုတ်ရည်လွှတ်အသုံးပြုပုံသော်လည်းမတောင်ပေါ်သို့မဟုတ် intromissions အားဖြင့်သွေးဆောင်အာရုံကြော activation သရုပ်ပြပါပြီ အဆိုပါ stria terminalis, preoptic ဧရိယာနှင့် thalamus intralaminar posterior (Coolen et al, 1996; ။ Coolen et al, 1997; ။ Coolen et al, 2003a; ။ Heeb နှင့် Yahr, 1996; Kollack-Walker ကနှင့် Newman က, 1997) ။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကဤအသုတ်ရည်လွှတ်-activated ဒေသများအတွက် lumbosacral ကျောရိုးကနေသွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိနှင့် retrograde သဲလွန်စများနှင့် hemisections thalamus intralaminar အဆိုပါ posterior ၏သုတ်ရည်လွှတ်-activated မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းကြောင်းသုံးပြီးသရုပ်ပြလျှင်, ဆိုလိုသည်မှာ medial subparafascicular thalamic နျူကလိယ (mSPFp) တစ်ဦးအနေဖြင့်တစ်မူထူးခြားသော input ကိုလက်ခံရရှိစမ်းသပ်ပြီး အဆိုပါ lumbar ကျောရိုးထဲမှာအာရုံခံ၏လူဦးရေ (။ Coolen et al, 2003a; Coolen et al, 2003b; ။ Ju et al, 1987; ။ Truitt et al, 2003b ။ ) ။ အလှည့်တွင်ဤဆဲလ် (Truitt et al ။ , 2003a) သုတ်ရည်လွှတ်-related တွေကို processing အတွက်မဟုတ်ဘဲတောင်ပေါ်သို့မဟုတ် intromissions အတူသုတ်ရည်လွှတ်နှင့်အတူအထူး Fos ဖော်ပြသူတို့၏အခန်းကဏ္ဍကိုထောက်ခံကြောင်း။ ထိုမှတပါး, lumbar mSPFp-ထုတ်လုပ်တဲ့ဆဲလ်၏ဤလူဦးရေအရံကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကနေသုတ်ရည်လွှတ်-related အာရုံခံသွင်းအားစုနှင့်လက်ခံ galanin, cholecystokinin, နှင့် opioid enkephalin (Coolen et al အပါအဝင်မြောက်မြားစွာ neuropeptides, ဖော်ပြနိုင်ရန်ခန္ဓာဗေဒအနေအထား၌ရှိကြ၏, 2003b; ။ Ju et al ။ , 1987; က Nicholas et al, 1999) ။ ။ function တွေဖြစ်တဲ့ CPP ကအဖြစ်သုတ်ရည်လွှတ်-သွေးဆောင်အပြုအမူတွေ, ကိုအထောက်အကူပြုရန်ဒီလမ်းကြောင်းနှင့် neurotransmitters, အတွင်းမယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်ကြောင့်မသိနိုင်ပါဘူး။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုသုတ်ရည်လွှတ်ကြွက်များတွင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အကျိုးအရှိဆုံးအစိတ်အပိုင်းကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ intromissions လိင်ရင်တော့မှားမယ်အတွက် CPP ကသွေးဆောင်သော်လည်းလိင်အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျား၌ရှိသကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အစိတ်အပိုင်းများကို၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ, ဆိုလိုသည်မှာ intromissions သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းကောက်ချက်ချ။
ဒါဟာသုတေသန LMC ဖို့ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institute (R01 DA014591) နှင့်ကျန်းမာရေးသုတေသနကနေဒါ Institutes ထံမှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။
ထုတ်ဝေသူ၏ငြင်းဆိုချက် - ဤသည်ထုတ်ဝေရန်အတွက်လက်ခံထားပြီးတည်းဖြတ်ခြင်းမရှိသေးသောလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သော PDF ဖိုင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည်။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းပုံစံထုတ်ဝေမီ, လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် copyed, စာရိုက်ခြင်းနှင့်ရလဒ်သက်သေအထောက်အထားများပြန်လည်သုံးသပ်လိမ့်မည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်သက်ရောက်နိုင်သည့်အမှားများနှင့်ဂျာနယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောတရား ၀ င်ငြင်းခုန်မှုအားလုံး၏အမှားများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
1 ။ Agmo တစ်ဦးကယင်းအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်လွှတ်၏ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့် Berenfeld R. : opioids နှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1990; 104: 177-182 [PubMed] ။
2 ။ Agmo တစ်ဦးက, ဂိုမက်ဇအမ်လိင်အားဖြည့်သည့် medial preoptic ဧရိယာသို့ naloxone ၏ပြုတ်ရည်များကပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1993; 107: 812-818 [PubMed] ။
3 ။ ME Balfour, ယု L ကို, Coolen LM ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအထီးကြွက်များတွင် mesolimbic system ကိုသက်ဝင်စေ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 718-730 [PubMed] ။
4 ။ Carr က GD, Fibiger HC, Phillips က AG က။ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်အေးစက်သောအရပ် preference ကို။ Liebman JM, Cooper က SJ, အယ်ဒီတာများ in: ။ ဆုလာဘ်၏ neuropharmacological အခြေခံ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1989 ။ စစ။ 264-319 ။
5 ။ Coolen LM, Allard J ကို, Truitt WA, McKenna Ke ။ သုတ်ရည်လွှတ်ဗဟိုစည်းမျဉ်း။ Physiol ပြုမူနေ။ 2004; 83: 203-215 [PubMed] ။
6 ။ Coolen LM, Olivier B က, ပီတာ HJ, Veening JG ။ 5-HT1A agonist 8-Oh-DPAT သုံးပြီးအထီးကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာသုတ်ရည်လွှတ်-သွေးဆောင်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုဆန္ဒပြပွဲ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1997; 62: 881-891 [PubMed] ။
7 ။ Coolen LM, ပီတာ HJ, Veening JG ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သူတွေရဲ့စားသောက်ဒြပ်စင်ပြီးနောက်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Fos immunoreactivity: တစ်လိင်နှိုင်းယှဉ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1996; 738: 67-82 [PubMed] ။
8 ။ Coolen LM, Veening JG, Petersen DW, Shipley MT ။ ကြွက်များတွင် Parvocellular subparafascicular thalamic နျူကလိယ: ခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ compartmentalization ။ J ကို comp Neurol ။ 2003a; 463: 117-131 [PubMed] ။
9 ။ Coolen LM, Veening JG, ဝဲလ် AB, Shipley MT ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အဘို့သက်သေအထောက်အထား: ကြွက်များတွင် parvocellular subparafascicular thalamic နျူကလိယ၏ Afferent ဆက်သွယ်မှု။ J ကို comp Neurol ။ 2003b; 463: 132-156 [PubMed] ။
10 ။ Garcia က Horsman P ကို, သိပ်မရှိပါဘူး RG ။ Dopamine ရန်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အရှိန်အဟုန်မိတ်လိုက်အပြုအမူအားဖြင့်သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကိုပိတျဆို့ကြပါဘူး။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2004; 118: 356-364 [PubMed] ။
11 ။ Heeb MM, လိင်-related လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် hypothalamus နှင့်အထီးတက်လာတယ်, ၏ဆက်စပ်ဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးများ၏လိင် dimorphic ဧရိယာ၌ Yahr P. က c-Fos immunoreactivity ။ neuroscience ။ 1996; 72: 1049-1071 [PubMed] ။
12 ။ Hughes လေး, Everitt BJ, opioid peptides, တွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သင်း၏ preoptic ဧရိယာတာဟာ၏ဟားဘတ်ဂျေနှိုင်းယှဉ်သက်ရောက်မှု: ဆာပအပြုအမူ၏လေ့လာမှုများ, Conditions ရာအရပျ preference ကိုများနှင့်မိတ်ဖက် preference ကို။ Psychopharmacology (Berl) 1990; 102: 243-256 [PubMed] ။
13 ။ Ju, G, Melander T က, Ceccatelli S က, Hokfelt T က, ကြွက်များတွင် cholecystokinin- နှင့် galanin ကဲ့သို့ immunoreactivities Co-င်တစ်ဦး spinothalamic လမ်းကြောင်းများအတွက် Frey P. Immunohistochemical သက်သေအထောက်အထား။ neuroscience ။ 1987; 20: 439-456 [PubMed] ။
14 ။ မပြည့်စုံခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Kagan ကပြောပါတယ်ဂျေ Differential ဆုလာဘ်တန်ဖိုး။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1955; 48: 59-64 [PubMed] ။
15 ။ Kippin TE, Pfaus JG ။ အထီးကြွက်များတွင် olfactory conditional ejaculatory ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ ချွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု၏ဗြဲသဘာဝတရား။ Physiol ပြုမူနေ။ 2001; 73: 457-469 [PubMed] ။
16 ။ Kollack-Walker က S နဲ့, Newman က SW ။ အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားကဦးနှောက်ထဲမှာက c-fos ၏မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်စကားရပ်: အတွေ့အကြုံ, pheromones နှင့်သုက်၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Neurobiol ။ 1997; 32: 481-501 [PubMed] ။
17 ။ လိုပက်ဇ်နာရီ, Olster DH, ယောက်ျားကြွက်များတွင် Ettenberg အေလိင်လှုံ့ဆျောမှု: မူလတန်းမက်လုံးပေးခြင်းနှင့် copulatory အတွေ့အကြုံကို၏အခန်းကဏ္ဍကို။ comp Physiol Psychol ။ 1955; 48: 59-64 ။
18 ။ Martinez ငါသိပ်မရှိပါဘူး RG ။ သာ Self-ပွေးညီမိတ်လိုက်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၏ကြွက်များတွင်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ Horm ပြုမူနေ။ 2001; 40: 510-517 [PubMed] ။
19 ။ Mehrara BJ, Baum MJ ။ Naloxone ဟူသောအသုံးအနှုနျးသော်လည်းမတစ်ဦး oestrous အမျိုးသမီးတစ် conditional ရာအရပျ preference ကိုတုန့်ပြန်၏အထီးကြွက်များအားဖြင့်ဝယ်ယူ disrupts ။ Psychopharmacology (Berl) 1990; 101: 118-125 [PubMed] ။
20 ။ Miller က RL, Baum MJ ။ Naloxone မကြာမီသင်းပြီးနောက်အထီးကြွက်များတွင်တစ်ခု estrous အမျိုးသမီးများအတွက်မိတ်လိုက်နှင့် conditional ရာအရပျ preference ကိုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1987; 26: 781-789 [PubMed] ။
21 ။ က Nicholas AP, Zhang က X ကို, ယောက်ျားကြွက် lumbosacral ကျောရိုး၏ lamina X ကိုအတွက် opioid ဆဲလ်ကော်လံ Hokfelt တီတစ်ခု immunohistochemical စုံစမ်းစစ်ဆေး။ neuroscience လက်တ။ 1999; 270: 9-12 [PubMed] ။
22 ။ Pfaus JG, Kippin TE, Centeno အက်စ်အခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Horm ပြုမူနေ။ 2001; 40: 291-321 [PubMed] ။
23 ။ Pfaus JG, Phillips က AG က။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ anticipatory နှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ dopamine ၏အခန်းက္ပ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1991; 105: 727-743 [PubMed] ။
24 ။ ရှက်ဖီး FD, Wulff JJ, ကျောထောက်နောက်ခံ R. လိင် drive ကိုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲသုတ်ရည်ထိဆုကြေးတန်ဖိုး။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1951; 44: 3-8 [PubMed] ။
25 ။ Straiko MM, Gudelsky GA, Coolen LM ။ MDMA တစ် serotonin-depleting regimen နှင့်အတူကုသမှုအထီးကြွက်များတွင်လိင်မှ conditional ရာအရပျ preference ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2007; 121: 586-593 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Truitt WA, Domingues JM, Adelman J ကို, Coolen LM ။ အဆိုပါ medial parvocellular parafascicular thalamic နျူကလိယသို့ Galanin တာဟာအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီး။ Horm ပြုမူနေ။ 2003a; 44: 81 ။
27 ။ Truitt WA, Shipley MT, Veening JG, Coolen LM ။ အထီးပေမယ့်အမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူးကြွက်များတွင် copulatory အပြုအမူပြီးနောက် lumbar spinothalamic အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်၏ activation ။ J ကို neuroscience ။ 2003b; 23: 325-331 [PubMed] ။